Maxaa ka jira eedeymaha ah in Ra’isulwasaare Khayre uu matalo khudbadaha madaxda adduunka? | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Maxaa ka jira eedeymaha ah in Ra’isulwasaare Khayre uu matalo khudbadaha madaxda...
Maxaa ka jira eedeymaha ah in Ra’isulwasaare Khayre uu matalo khudbadaha madaxda adduunka?
Balse Soomaaliya waxaa dhowaan hadal heyn dhalisay khudbad uu jeediyay Ra’isulwasaaraha, taas oo la sheegay in uu ka soo minguuriyay khudbado ay horey u jeediyeen madaxda adduunka.
Hadalka oo kaliya ma ahan waxyaabaha uu matalo Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre, sida uu qabo Falanqeeye Cabdisataar, xitaa hab dhaqanka uu kusoo bandhigo fagaarayaasha ayuu sheegay in ay yihiin kuwa matalaad ah “Ficilka uu sameeyo Kheyre xitaa haddii aad u fiirsatid waa kuwii madaxweyne Barack Obama, tusaale orordka iyo rucleynta”.
Khudbadaha iyo ficilada gaarka ah ee ay sameeyaan hoggaamiyeyaasha adduunka sida labiska waxa ay galaan diiwaanka dhacdooyinka adduunka, balse Cabdisataar waxa uu is weydiinayaa inay jiraan waxyaabo gaar u ah Kheyre oo galaya doowaankaas.
“Diiwaanka waxaa u galaya in uu Xassan Cali Kheyre yahay oo uu noqday Ra;isulwasaaraha Soomaaliya, balse diiwaanka uma galayaan wax madax kale oo adduunka ay lahaayeen oo uu soo minguurayey, waxaadna garan kartaa in hadhoow lagu mashquuli doono cidda asal ahaan tiri hadalka uu isaga jeedinayay ee aan isaga la xusuusan doonin, kaliya waxaa loo isticmaali doonaa tixraac” ayuu intaas raaciyay.
Dadka minguuriyay khudbadaha dadka kale
Sannadkii 2016-kii, xaaska madaxweynaha Maraykanka Malenia Trump ayaa si weyn loogu fadeexeeyay kadib markii ay si toos ah usoo minguurisay khudbad ay jeedisay Michele Obama oo ah xaaska madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama.
Tan ayaa waxa ay keentay in shaqadii laga eryo qofkii khudbadda u qoray.
Sidoo kale , sida aad muuqaalka ka dheehan kartaan, waxaa jiray dadyow kale oo minguuriyay khudbado ay lahaayeen madax iyaga ka horeysay.
Barack Obama iyo ku xigeenkiisi Joe Biden ayaa labaduba ka mid ah dadka hadaladooda la minguuriyay.
Hase yeeshee waxaa iska caadi ah in erayo ama xikmado laga soo xigto madaxda iyo dadka kale ee caanka ah, balse ay qasab tahay in iyaga loo tiiriyo.
Ma yara dhacdooyinka Ra’isulwasaare Kheyre ku saabsan ee lala barbar dhigay kuwa madaxda kale ee adduunka, waxaa xitaa jiray sawir aad u faafay oo muujinayay habka loo sugo amniga Ra’isulwasaaraha oo lala barbardhigay kan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Si kastaba ha ahaatee, Ra’isulwasaare Kheyre ayaa noqday shaqsiga loogu mutaabacayn badanyahay madaxda Soomaalida, iyada oo aad loogu fiirsado, lagana falceliyo waxyaabaha uu fagaarayaasha kusoo bandhigo haddii ay ahaan lahayd qaabka uu hadalada u jeediyo, labiskiisa, iyo ficiladiisa kale.